Feature - Part 37
वल्ड ट्राफाेर्डमा किन भयाे माेउरिन्हाेकाे पतन
जाेजे मोरिन्ह्योलाई म्यानचेस्टर युनाइटेड फुटबल क्लबले बर्खास्त गरेपछि यसकाे चर्चा विश्व फुटबलमा भइरहेकाे छ । एक समय उनले छाेएकाे क्लव सुन हुन्छ भनेर भनिने भनाइ यतिबेला पुरै परिवर्तन भएकाे छ । युराेपियन क्लव फुटबलका सफल प्रशिक्षक…
फ्यान, जसले मनाङकाे खेल हेर्न ७०० किलोमिटर यात्रा गरे
नेप्लेज । दर्शकको हुटिङ्कावीचमा खेल्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । यो भनाई अक्सर सबै खेलाडीको हो । क्रिकेट होस वा फुटबल, दर्शकविनाको खेल निरस नै हुन्छ । दर्शकको हल्लाले खेलाडीलाई बेग्लै जोस दिन्छ । कुनै पनि प्रतियोगिताको सफलता दर्शकको…
इपीएल र स्तर, खेलाडी भन्छन्- ‘मैदानमा पुगेपछि राेबाेट जस्तै फिल हुन्छ’
काठमाडौंमा जारी एभरेष्ट प्रिमियर लिगको नकआउट चरणका खेलहरु भइरहेका छन् । यसपटकको इपीएलमा नेपालमा हुने प्रतियोगिताहरु भन्दा धेरै स्तरीय बनाउन खोजिए पनि त्यो आयोजकलाई भ्रम मात्र भएको छ । इपीएलको आयोजक र ब्यवस्थापनमा मैदानमा पुग्ने प्रायःसबै…
‘गाेलकिपिङ’ फुटबलकाे अपजसिलाे पाेजिसन : विशाल श्रेष्ठ
नेप्लेज । जावलाखेल मैदान । सदर चिडियाखानाको मुख्य ढोकाको ठीक अगाडी रहेको मैदानमा पल्सर ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानमा रहेको सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका खेलाडीले अभ्यास गर्ने मौका पाए । भाग्यवस् यसअघि प्रशिक्षण गर्दै आएको सानो गौचरणको…
आफ्नै मैदानमा किन अपरिचित जस्तै छन् नेपाली क्रिकेटर
नेप्लेज, २ पुस । नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा भएपछि विभिन्न क्षेत्रले आफ्नो किसिमले घरेलु प्रतियोगिताहरु गरिरहेका छन । त्यसमा पनि टी–२० फरम्याटमा तीन ठूला प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र एभरेष्ट प्रिमियर लिगले आफ्नै…
शक्तिकाे करियरकाे अन्तिम खेलमा किन राष्ट्रिय खेलाडीकाे उपस्थिती न्युन ?
नेपाली क्रिकेटलाई करीव १८ बर्ष सर्भिस गरेका स्टार खेलाडी शक्ति गौचनले करियरको अन्तिम खेल खेलेर शनिबार विदाई लिए । नेपाली क्रिकेटको उताड चडावका साक्षात्कार बनेका शक्तिको विदाई भने निकै खल्लो रह्यो । नेपाली क्रिकेटलाई यतिका बर्षसम्म योगदान…
इपीएल क्रिकेटकाे पहिलाे दिन २७ फाेटाेमा हेर्नुहाेस
एभरेष्ट प्रिमियर लिग आजदेखि शुरु भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले उद्घाटन गरेको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन विराटनगर वारियर्सले ललितपुर प्याट्रियोट्सलाई ३ विकेटले हरायो । खेल सुरूहुन पूर्ब गरिएकाे…
इपीएलमा काठमाडाैं किंग्ससँग जाेडिएकी अस्मिता र अनिशा
एभरेष्ट प्रिमियर लिग सुरु हुने एक दिन अगाडी किर्तीपुर मैदान काडमाडौं किंग्सको पुरुष टिमसँगै दुई जना महिला खेलाडी पनि प्रशिक्षण गरेको देखियो । हुन त इपीएलमा पुरुष खेलाडीले खेल्ने हो । तर काठमाडौं किग्ंसले युवा खेलाडीका लागि गरेको ट्यालेन्ट…
के साँच्चै खस्किदै छ नेपाली ब्याटमिन्टन ?
नेपाली खेलकुदमा ब्याटमिन्टन पुरानो खेल मध्येमा पर्छ, राणाकालिन शासन देखि नै नेपालमा ब्याटमिन्टनले जरा गाडेपनि यसले उल्लेख्य सफलता भने अहिलेसम्म खासै हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालको अहिलेसम्मको ठुलो अन्तराष्ट्रिय उपलब्धि भनेको स्वर्ण पदक…
अन्तिम समयमा काम गर्ने प्रवृतिकाे चपेटामा अाठाैं राष्ट्रिय खेलुकद
नेपाली खेलकुदमा बृहत रुपले आयोजना गर्ने एउटा मात्र प्रतियोगिता हो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । तर त्यहि राष्ट्रिय प्रतियोगिता अहिलेसम्म भनेको जस्तो बृहत रुपमा हुन सकेको छैन । चाहे त्यो पुर्वाधार धेरै भएको काठमाडौमा आयोजना भएको पाँचौ…